DHAAMSA – Welcome to bilisummaa
bilisummaa June 20, 2014	2 Comments
ILMAAN OROMOO BARATAA YUNVERISTII (BARATTAN)TAATAN HUNFAAF
boqonnaaf gara maatii keenyaa yeroo gallutti gochaa wayyaaneen ilmaan oromoo irratti raawwachaa jirtu lammi kenya hunda hubachiisuun dirqama keenya ta’uu barree abjuu isheen oromiyaaf qabdu akkasumas duguuggaa sanyii raawwachaa jirtuuf maatii keenya hubachiisuu akka qabnu fi akka fashaleesinu kabajaan isin gaafanna.
Previous Galmee seenaa keessaa…
Next Sochiileen bara 2014 godhaman seenaa uummata Oromoo keessatti bakkee guddaa qabu
Yadaa bareedaadha. Yaroo barreesitan, ammoo, akka namaa galu gabaabsaa.
Yaada bareedaadha. Ammo, hima (sentence dheeraan wan barreefameef nama hingalu. Kanaafu, himmeen (sentences) gagabaaboon barreessaa.
Leave a Reply to Golboo Arbaa Cancel reply